Wershada dhuuqmada leh - Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha
5XWM mashiinka kala soocida dhererka dhererka dhululubada
5XWM Taxanaha Indented Sylinder (Daraasadaha Dhererka) waxa kale oo loo magacaabay Grain Selecting Grader ama Sarreeye hadhuudh jabay. Waxay u qiimaysaa hadhuudhka iyo iniinaha iyadoo loo eegayo dhererka, waxay kala sooci kartaa wasakhda dheer ama ka gaaban iyo alaabta granular.
Dhululubada la jeexjeexay ayaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro dhererka dhammaan agabyada granular sida sarreenka, sarreenka, buckwheat, iniinta cawska, ulaha iniinaha gabbaldayaha ama dabocase sonkorta, qaybo caag ah iwm, iyo sidoo kale soo saarida ee isku dhafan gaaban ama dheer aan la rabin.
5XWY dhererka dhululubada jeexan ee darajada sare ee sarreenka qamadiga ah
Silinder-ka Taxanaha 5XWY (Daraasadaha Dhererka) waxa kale oo loo magacaabay Grain Selecting Grader ama Kala-duwayaasha hadhuudhka jabay. Waxay u qiimaysaa hadhuudhka iyo iniinaha iyadoo loo eegayo dhererka, waxay kala sooci kartaa wasakhda dheer ama ka gaaban iyo alaabta granular.
Dhululubada la jeexjeexay ayaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro dhererka dhammaan agabyada granular sida sarreenka, bariiska, sarreenka, buckwheat, abuur cawska, ulaha iniinta gabbaldayaha ama dabocase sonkorta, qaybo caag ah iwm.